1. धेरै मानिसहरूलाई विन्डोज कम्प्युटरहरू लामो समयदेखि प्रयोग गर्न प्रयोग गरिएको थियो र पत्ता लगाउनुहोस् कि म्याक प्रयोग गर्न गाह्रो छ, तातो कुञ्जीहरू के हुन् भनेर नजान, उनीहरू परिचित छैनन्, तिनीहरू अझ राम्रो छैनन्, वास्तवमा म्याक एक स्थिर अपरेटिंग प्रणाली हो। योसँग अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सुरक्षा प्रणाली छ जुन तपाईंलाई सोच्न भन्दा प्रयोग गर्न सजिलो छ। आज हामी म्याक ओएसको स्क्रिनसटहरू कसरी लिने भनेर परिचय दिनेछौं, जुन धेरै र धेरै सजिलो विधिहरू हुन्।
2. सिफ्ट + कमान्ड + keys कुञ्जी एक साथ थिच्नुहोस् पूरा स्क्रिन क्याप्चर।
3. जब स्न्यापको आवाज सुन्छ क्याप्चर गरिएको स्क्रीनशट डेस्कटपमा बचत हुनेछ र आवश्यकको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
4. शिफ्ट + कमान्ड + keys कुञ्जी एकै साथ थिचेर मैन्युअल क्रप क्याप्चर।
5. तपाईले माउस कर्सरको वरपर "+" प्रतीक देख्नुहुनेछ। बायाँ क्लिक गर्नुहोस् र तान्नका लागि क्षेत्र को लागी तान्नुहोस्। त्यसो भए माउस छोड्नुहोस्। तपाईंले लिनुभएका तस्वीरहरू डेस्कटपमा बचत हुनेछ।
6. छनौट क्रपको साथ रेकर्ड गरिएको छविको उदाहरण।
7. शिफ्ट + कमान्ड + keys कुञ्जी एक साथ थिच्नाले स्क्रिन क्याप्चर र स्क्रिन भिडियो रेकर्डि।।
8. चित्रमा देखाइएको अनुसार प्रणालीले चयन गर्न क्याप्चर मेनू प्रदर्शन गर्दछ।
9. प्रत्येक मेनूको अपरेशन बायाँबाट दायाँ देखिन्छ: the सम्पूर्ण स्क्रिन क्याप्चर गर्नुहोस् only केवल सक्रिय विन्डो क्याप्चर गर्नुहोस् ● मैन्युअल क्रप क्याप्चर ● सम्पूर्ण स्क्रिन भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्aएक छनौट स्क्रिन भिडियो रेकर्ड गर्नुहोस्। म्यानुअल ● अतिरिक्त अपरेशन विकल्पहरू ● क्याप्चर बटन - क्याप्चर वा रेकर्ड - भिडियो रेकर्डि start सुरू गर्नुहोस्। जब भिडियो रेकर्डि starts सुरु हुन्छ, तपाईं कुनै पनि समयमा शीर्ष दायाँ मेनू बारमा "◻" चिन्ह क्लिक गरेर रेकर्डिंग रोक्न सक्नुहुन्छ। जब तपाईं रोक्नुहोस् क्लिक गर्नुहोस्, तपाईंको भिडियो स्वचालित रूपमा डेस्कटपमा बचत हुनेछ।
10. र चीजहरूको गति बढाउन यहाँ केहि उपयोगी सुझावहरू छन् जुन तपाईंको म्याकले स्क्रिन क्याप्चर गर्दछ। छवि फाइल को एक सानो पूर्वावलोकन तल्लो दायाँ कुनामा प्रदर्शित हुनेछ। तपाईं क्लिक गर्न र पूर्वावलोकन छवि होल्ड गर्न माउस प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ र लाइन कार्यक्रम वा गुगल कागजातमा ड्र्याग गर्न र ड्रप गर्न वा अगाडि बढाउन वा तुरून्त काम पुनः सुरु गर्न सक्नुहुन्छ।
11. माथिको उदाहरणबाट, यो देख्न सकिन्छ कि एप्पल जस्तो म्याक ओएस विकासकर्ताहरूले उनीहरूको काममा भएको थोरै विवरणमा ध्यान दिन्छन्। छनौट गर्न विभिन्न प्रकार्यका साथ एक स्क्रीनशट लिँदै। फोटो वा भिडियो ट्रिमिंगमा धेरै समय बचत गर्दछ। अगाडि पठाइएको वा तुरून्त प्रयोग गरिएको फाईलहरू आयात गर्न सक्षम। त्यहाँ म्याक ओएस को उपयोग को लागी उपयोगी सुझावहरु छन् तपाइँको काम सजिलो र छिटो बनाउन मद्दत गर्न। हाम्रो वेबसाइट अनुसरण गर्न क्लिक गर्नुहोस् चाखलाग्दो समाचार र लेखहरू प्राप्त गर्न जुन हामी अर्को अवसरमा जम्मा गरिरहेका छौं।